२४ घन्टामा थपिए २४ नयाँ संक्रमित : देशभर संक्रमितको संख्या १३४ पुग्यो – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/२४ घन्टामा थपिए २४ नयाँ संक्रमित : देशभर संक्रमितको संख्या १३४ पुग्यो
२४ घन्टामा थपिए २४ नयाँ संक्रमित : देशभर संक्रमितको संख्या १३४ पुग्यो
पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनाका २४ नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तुमा १६, रुपन्देहीमा ६ तथा बर्दिया र सप्तरीमा एक–एक गरी एकैदिन २४ संक्रमित थपिएका हुन् । अब देशभर संक्रमितको संख्या एक सय ३४ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सोमबार पुष्टि भएका सबै संक्रमित क्वारेन्टाइन बसेका थिए । हालसम्म १७ हजार आठ सयजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक सय ३४ पुगेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए । जसमध्ये ३३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
केही दिनअघि चरम अभाव भएको पिसिआर परीक्षण गर्ने किटको मौज्दात अहिले बढेको छ । स्विट्जरल्यान्ड सरकारले दिएको ६० हजार र सोमबार चीन सरकारले दिएको ४० हजार गरी अहिले एक लाख किट मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, करिब १० हजारको संख्यामा अन्य दाताले पनि सहयोग गरेका छन् । ती किट जिल्लाहरूमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब सेनाले ३० हजार किट ल्याउँदै छ भने स्वास्थ्य सेवा विभागले ३० हजार किट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।
संक्रमितलाई राख्न ३४५ आइसियू र १४६ भेन्टिलेटर तयार
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा नौ सय नौ आइसियू र पाँच सय ३९ भेन्टिलेटर छन् । तीमध्ये तीन सय ४५ शय्या आइसियू र एक सय ४५ भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार गरिएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति सय संक्रमितमध्ये २० जनालाई आइसियूको आवश्यकता पर्छ । त्यसमध्ये ५ प्रतिशतलाई उपचारका क्रममा भेन्टिलेटर चाहिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा संक्रमितको उपचार गर्न २५ अस्पताल तय गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार कोरोना संक्रमितका लागि मात्रै नौ सय ७४ आइसोलेसन बेड तयार गरिएका छन् । कोरोना पुष्टि भएका, तर स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर लक्षणअनुसार उपचार गरिन्छ ।
संक्रमितलाई आइसियूमा राख्नुपरे छुट्टै जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । तर, सरकारसँग २९ जना मात्रै त्यस्तो क्रिटिकल केयर हेर्ने एनेस्थेसियातर्पmका चिकित्सक छन् । सरकारले एनेस्थेसियोलोजिस्ट अभाव देखेपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर क्रिटिकल केयर हेर्ने तीन सय १७ जनाको जनशक्ति तयार पारेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेकर्डमा भने पाँच सय १० जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट दर्ता छन् ।